अन्तर्राष्ट्रिय समाचार Archives - Mero Khabar Nepal
कार्यक्रमका लागी मलेसिया पुगेका ४ नेपाली कलाकार प्रकाउ…
मलेसिया जेठ २४ । मलेसियामा कार्यक्रमको लागी पुगेका चार नेपाली कलाकार प्रकाउ परेका छन् । इदको अवसर पारेर मलेसियामा आयोजित एक नेपाली कार्यक्रममा आएका ४ नेपाली कलाकार प्रकाउ परेका हुन् । साङ्गेतिक मनोरञ्जन गराउन आएका कलाकारहरूलाई मलेसियाली अध्यागमनले प्रकाउ गरेको हो । कार्यक्रम भइरहेका बेला अध्यागमनको छापामा नेपाल बाट आएका कलाकारहरु सहित अन्य दर्शकहरु पनि पक्राउ परेका छन् । कार्यक्रम एसएसओजी ग्रुपद्वारा आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा गायिका श्रेया राई, सुजन आङदम्बे, सुनिता थेगिम सहित स्थानीय कलाकारहरू र आयोजक पनि प्रकाउ परेका हुन् । ममलेसियाको क्यालालम्पुर स्थित कोत्ताराया कम्प्लेक्समा बिहिबार मलेसियाली अध्यागमनले स्थानीय समय अनुसार ३ बजे छापा मारेको थियो । नेपाल बाट आएका कलाकारले आफ्नो प्रस्तुति दिन नपाउँदै अध्यागमनले छापा मारे पछि कार्यक्रम नै स्थगित भएको थियो । कार्यक्रम स्थलमै
एजेन्सी- गत वर्षको अक्टोबरमा हत्या भएकी मोडेल मानसी दीक्षितको घटनामा प्रहरीले एक ठूलो खुलासा गरेको छ। सेक्स गर्न नमानेको कारण उनको हत्या भएको भारतीय प्रहरीले खुलासा गरेको हो।गत वर्षको अक्टोबर १५को दिन मानसी दीक्षित मुम्बई स्थिति मलाडमा रहेको माइन्डस्पेस नजिकैको एक झाडीमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। ब्याकमा कोचिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो।प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा घटनामा संलग्नता रहेको भन्दै मानसीका मिल्ने साथी मुजम्मिल सईदलाई गिरफ्तार गरेको थियो। पक्राउ परेका मुजम्मिलले आफ्नो अपराध स्वीकार समेत गरेका थिए।फ्ल्याटमा सँगै हुँदा सानो विषयलाई लिएर झगडा हुँदा आफूबाट यस्तो अपराध हुन पुगेको मुजम्मिलको बयान थियो। झगडा बढ्दै जाँदा आवेशमा आएर आफूले टाउकोमा हान्दा मृत्यु भएको बयान दिने मुजम्मिल अहिले आएर गलत सावित भएका छन्।झगडाको कारण मानसी हत्या भएको नभई सम्बन्ध राख्न मानसीले अस्विक
काठमाडौं-यो हप्ता अमेरिकी डलरसँगै अरु विदेशी मुद्राको भाउमा केही गिरावट आएको छ । शुक्रबार खरिददर ११४ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ ४८ पैसामा झरेको छ । बिहीबार डलरको खरिददर ११५ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ११६ रुपैयाँ थियो । आइतबार कतारी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ९४ पैसा रहेकोमा शुक्रबार खरिददर ३१ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकिएको छ । बिहीबार कतारी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ८५ पैसा थियो । यस्तै आइतबार युएई दिर्हाम १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेकोमा शुक्रबार खरिददर ३१ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ४४ पैसामा झरेको छ । बिहीबार युएईको दिर्हामको खरिददर ३१ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ५८ पैसा तोकिएको छ । आइतबार साउदी रियाल १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ८४ पैस
चितवनको गणेशस्थानमा ८० करोड खर्चेर धाम निर्माण गरिने
चितवन, २३ कात्तिकः भरतपुर महानगरपालिका–११ मा रहेको धार्मिक एवं ऐतिहासिकस्थल गणेशस्थानलाई रु ८० करोड खर्चेर गणेश धामको रुपमा विकास गरिने भएको छ । भरतपुरको मुख्य बजार नजिक रहेको यस स्थललाई धार्मिकस्थल र पार्कका रूपमा विकास गरिने भएको हो । गणेशस्थान मन्दिर क्षेत्रको धार्मिक वन २.४३ हेक्टर छ भने नवजगृति सामुदायिक वन र जलदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रसँग सहकार्य गरी थप ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा यो धाम विस्तार गरिने योजना अघि बढाइएको छ । यस क्षेत्रका प्रदेश सांसद विजय सुवेदीले नमूना क्षेत्रका रूपमा गणेशस्थानलाई विकास गरिने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्न लागिएको उहाँको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षमा रु ८० लाख विनियोजन गरिसकेको छ । स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार, जनसहभागिता र निजी क्षेत्रको सहयोगमा गणेशस्थानलाई धामको रूपमा विकास गरिने र सो कार्यका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवे
अपडेट : डान्सबारमा भएको गोली काण्डमा १२ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित एक डान्सबारमा अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु भएको छ । क्यालिफोर्निया राज्यस्थित थाउजेन्ड वोक्स सहरमा रहेको बोर्डरलाइन बार तथा ग्रिल रेस्टुरेन्टमा भएको गोलीकाण्डमा एकजना प्रहरी अधिकारीसहित कम्तीमा १२ जना मारिएका हुन् । अमेरिकी अधिकारीहरुका अनुसार बन्धुकधारीको रेस्टुरेन्टभित्रै मृत्यु भएको छ । उनको परिचय भने नखुलेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । बुधबार राति झण्डै २०० जना व्यक्ति त्यस रेस्टुरेन्टमा कलेज पार्टीमा रमाइरहेका बेला आक्रमणकारीले अन्धाधुन्ध गोली चलाएको हो । कलेजको पार्टी भइरहेको उक्त बार आगन्तुकहरुले भरिभराउ भएको बेला बन्दुकधारीले गोली चलाएको हो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बन्दुकधारीले गोली चलाउन थालेपछि बारमा आतंकको अवस्था सिर्जना भएको थियो। गोली चल्न थालेपछि बारमा रहेका मानिसहरु ज्यान जोगाउन कोही झ्याल फोरेर भागेका थिए भने केह
फ्रान्सले उपाधिसहित ३९ मिलियन डलर पायो, कसले कति पाए
रसियामा जारी २१औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलको उपाधि २० वर्षपछि फ्रान्सले जितेको छ। आइतबार मस्कोमा क्रोएसियालाई ४–२ गोल अन्तरले हराउँदै फ्रान्सले दोस्रो पटक उपाधि रक्षा गरेको हो। उपाधिसँगै फ्रान्सले १८ क्यारेट सुनको ट्रफीसँगै ३९ मिलियन डलर अर्थात करिब ४ अर्ब नेपाली रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ।दोस्रो भएका क्रोएसियाले २८ मिलियन डलर र तेस्रो भएको बेल्जियमले २४ मिलियन डलर पाएको छ। यस्तै चौथो भएको इंल्याण्डले २२ मिलियन डलर पाएको छ। रसिया विश्वकप २०१८ मा कुल पुरस्कार राशी ७९१ मिलियन डलर रहेको छ। यसअघि ब्राजिल विश्वकप सन् २०१४ को विश्वकप तुलनामा ४० प्रतिशत अर्थात ३० लाख डलर बढी छ।ब्राजिलको विश्वकपमा कुन पुरस्कार राशी ५७६ मिलियन डलर थियो भने २०१० मा दक्षिण अफ्रिकामा भएको प्रतियोगितामा यो रकम ४२० मिलियन डलर थियो। स्पेनमा १९८२ भएको विश्वकपमा २० मिलियन डलर, मेक्सिकोमा १९८६ मा २६ मिलियन डलर, इटाल
यी हुन् विश्वका महँगा खेलाडी, नेयमार पहिलो, रोनाल्डो चौंथो !
एजेन्सी । रियल मड्रिडका पूर्वफरवार्ड तथा पोर्चुगलका कप्तान क्रिष्टियानो रोनाल्डो मंगलबार ११२ मिलियन युरोमा इटालियन क्लब युभेन्टसमा आवद्ध भएसँगै उनी सर्वाधिक महंगा खेलाडीमा चौंथो भएका छन् । ३३ वर्षीय रोनाल्डो युभेन्टस गएसँगै सर्वाधिक रकममा अनुबन्ध हुने चौंथो खेलाडी बनेका हुन् । सन् २००९ मा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट कीर्तिमानी रकम ८० मिलियन पाउन्डमा रियलमा आवद्ध भएका थिए । रियलका लागि रोनाल्डोले ४५१ गोल गरिसकेका छन् । पाँच पटकको बालोन डी’ओर बिजेता रोनाल्डोले रियललाई पाँच पटक च्याम्पियन्स लिग जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । रोनाल्डो विश्वको चौथो महँगो खेलाडी बन्नुका साथै क्लब कीर्तिमानी रकममा यूभेन्ट्स गएका हुन् । यसअघि यूभेन्टसले ७५.३ मिलियन पाउन्ड तिर्दै गोन्जालो हिगुइनलाई नेपोलीबाट २०१६ जुलाईमा भित्र्याएको थियो । विश्वका मंहगा अनुबन्ध हुने खेलाडी विश्वको सबैभन्
अब देखि मलेसिया मा नेपाली कामदार किन जान नपाउने हेर्नुस् यो भिडियो स्पष्ट हुने छ ।
अब देखि मलेसिया मा नेपाली कामदार किन जान नपाउने हेर्नुस् यो भिडियो स्पष्ट हुने छ । https://youtu.be/Bpy-Kj2GQv8
नेपाल पैसा पठाउदै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको विनियम दर यस्तो छ (सुचिसहित)
काठमाडौं । आज मिति २०७५ साल जेष्ठ ८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी मुद्रा विनिमयदर अनुसार साउदी अरवको रियालको खरिददर २८ रुपैयाँ ९८ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ । – कतारी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ८५ पैसा र विक्रिदर ३० रुपैयाँ ०२ पैसा – युएई दिर्हाम एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ५९ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ ७६ पैसा – मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ३१ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ ४६ – कोरियन वन १ सयको खरिददर १० रुपैयाँ ०३ पैसा र विक्रिदर १० रुपैयाँ ०९ पैसा – एक कुवेती दिनारको एकको खरिददर ३ सय ५९ रुपैयाँ ६४ पैसा विक्रिदर ३ सय ६१ रुपैयाँ ६२ पैसा – एक बहराइन दिनार एकको खरिददर २ सय ८७ रुपैयाँ ८७ पैसा र विक्रिदर २ सय ८९ रुपैयाँ ४६ नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको दरमा वाणिज्य बैंकहरुले भने केही रकम तलमाथि गरेर मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था रेहको छ। हेर्नुस्
बढ्यो विदेशी पैसाको मुल्य ! आजको लागि साउदी,कतार,मलेसिया लगाएत विभिन्न देशको मुद्राको सटहीदर यस्तो छ
बैशाख ४, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर यसप्रकार रहेको छ । साउदी रियाल एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ८६ पैसा र विक्रिदर २८ रुपैयाँ ०२ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर २८ रुपैयाँ ७० पैसा र विक्रिदर २८ रुपैयाँ ८६ रुपैयाँ छ । युएई दिर्हाम एकको खरिददर २८ रुपैयाँ ४५ पैसा र विक्रिदर २८ रुपैयाँ ६१ पैसा तोकेको छ । मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २६ रुपैयाँ ८७ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ ०३ पैसा रहेको छ । कोरियन वन १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ७३ पैसा र विक्रिदर ९ रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको छ । कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ४८ रुपैयाँ ५४ पैसा छ भने विक्रिदर ३ सय ५० रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ । बहराइन दिनार एकको खरिददर २ सय ७७ रुपैयाँ १३ पैसा र विक्रिदर २ सय ७८ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको दरमा वाणिज्य बैंकहरुले भने केही रकम तलमाथि गरेर मूल्य तोक्न स